कहीं स्प्याम र डरलाग्दो झूठ पारदर्शिता बीच | Martech Zone
कहीं स्प्याम र डरलाग्दो झूठ पारदर्शिता बीचमा
सोमबार, मार्च 26, 2018 मंगलवार, मार्च 27, 2018 Douglas Karr
हालसालैका हप्ताहरू मेरो लागि मुख्य धाराका समाचारहरूमा रिपोर्ट गरिएका डाटा स्कान्डलहरूका लागि आँखा खोलिरहेका छन्। म ईमानदारीपूर्वक मेरो धेरै साथीहरु द्वारा उद्योग मा मा आकर्षित गरीएको छ र आफ्नो घुँडा-झटका प्रतिक्रिया र सबैभन्दा नयाँ अभियानको समयमा कसरी फेसबुक डाटा काटियो र राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरीयो भन्ने प्रतिक्रिया।
राष्ट्रपति अभियान र डाटा मा केहि ईतिहास:
2008 - मैले राष्ट्रपति ओबामाको पहिलो अभियानबाट डाटा ईन्जिनियरसँग अद्भुत कुराकानी गरें जसले उनीहरूको डाटा कसरी काट्छन् र डाटा खरिद गर्दछन्। उनीहरूको प्राथमिक गाह्रो थियो, र डेमोक्र्याटिक पार्टीले दाता र समर्थकहरूको सूची जारी गर्दिन (प्राथमिक जित्नुभएसम्म)। नतिजा यो भयो कि यो अभियान बिग्रिएको, समन्वय गरिएको थियो र इतिहासको सब भन्दा आश्चर्यजनक डाटा गोदामहरू मध्ये एक बनाइएको थियो। यो यति राम्रो थियो कि लक्ष्यीकरण नजिकैको छेउछाउमा गयो। सहित डाटा को उपयोग फेसबुक, शानदारको केही पनि थिएन - र यो प्राइमरी जित्ने कुञ्जी थियो।
2012 - फेसबुक राष्ट्रपति ओबामाको अभियानको साथ प्रत्यक्ष काम गरे र, यस्तो देखिन्छ कि डाटा ल्याइएको कसैको अपेक्षाहरूभन्दा बाहिरको मत ल्याउन र राष्ट्रपतिलाई दोस्रो चुनाव जित्न सहयोग पुर्‍याउने।
2018 - एक whistleblower को माध्यम बाट, क्याम्ब्रिज एनालिटिका एक कम्पनी को रूपमा बाहिर भयो फेसबुकको डाटा क्षमताहरूको शोषण गरियो डाटा को अविश्वसनीय मात्रा को उपयोग गर्न।
अब, सत्यलाई भन, पहिलो दुई अभियान फेसबुक संग समन्वय हुन सक्छ (त्यहाँ अभियान र फेसबुक बोर्ड सदस्यहरु बीच एक ओभरल्याप पनि थियो)। म एक वकिल होइन, तर यो शंकास्पद छ कि फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरूले यस प्रकारका डाटा प्रयोगलाई फेसबुक सर्तहरू मार्फत स्वीकार गरे कि गर्दैनन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको अभियानमा, यो स्पष्ट छ कि यो खाली भएको शोषण भएको थियो, तर त्यहाँ अझै प्रश्न छ कि कुनै कानून भ broken्ग भयो कि भएन।
यसको केही मुख्य कुरा यो हो कि जब प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोगहरूमा भाग लिएका हुन सक्दछन् र उनीहरूको डाटा पहुँच गर्न अनुमति प्रदान गर्दछन्, उनीहरूका साथीहरूको अनलाइन डाटा पनि काटियो। राजनीतिमा यो कुनै असामान्य कुरा होइन कि समान राजनीतिक दृष्टिकोण भएका मानिसहरू अनलाइन भेला हुन्छन्… त्यसैले यो डाटा एकदम सुनको खानी थियो।
यो राजनीतिक पोष्ट होईन - यसबाट धेरै टाढा छ। राजनीति ती उद्योगहरू मध्ये एक हो जहाँ डेटा अभियानमा बिल्कुल महत्वपूर्ण भएको छ। यस प्रकारको अभियानको लागि दुई लक्ष्यहरू छन्:
उदासीन मतदाता - उदासीन मतदाताहरुलाई देखा पर्न र भोट दिन प्रोत्साहित गर्न साथी र सहयोगीहरुलाई उत्साहित गर्नु यी अभियानहरुको प्राथमिक रणनीति हो।
निर्विवाद मतदाताहरू - निर्विवाद मतदाताहरू सामान्यतया एक दिशा वा अर्कोतिर झुकाव हुन्छन्, त्यसैले ठीक समयमा उनीहरूको अगाडि सही सन्देशहरू प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण छ।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, यी दुबै मतदाताहरू एकदमै सानो प्रतिशत हुन्। हामी मध्ये अधिकांश हामी जान्दछौ कुन तरिका बाट हामी कुनै चुनाव अघि मतदान गर्न लागेका छौं। यी अभियानहरूको कुञ्जीले स्थानीय दौडहरू पहिचान गर्नु हो जहाँ जित्ने मौका छ, र ती दुई क्षेत्रहरू पछ्याउन कडा कडा परिश्रम गरिरहेको घटनामा तपाईं उनीहरूको भोटलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय पार्टीहरूले ती स्थानहरूमा पनि देखाउँदैनन् जहाँ उनीहरू विश्वस्त छन् कि उनीहरू जित्न चाहन्छन् वा हराउन लागेका छन् ... यो स्विing्ग स्टेट्सले उनीहरूलाई लक्षित गरेको छ।
पछिल्लो चुनाव यत्तिको विभाजनकारी भएको कारण, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि पद्धतिहरू अहिले खोसिएका छन् र यस्तै छानबिन गरिन्छ। तर म रणनीतिमा हमला गर्नेहरूको आक्रोश र म पक्रिएकाहरूको mea Culpas लाई प्रश्न गर्दछु। राजनीतिमा जानकार सबैले बुझ्दछ कि आलोचनात्मक डेटा कसरी भयो। सबैलाई थाहा थियो कि तिनीहरूले के गरिरहेछन्।
मार्केटिंग डाटा र गोपनीयता को भविष्य
उपभोक्ताहरू (र, यस अवस्थामा मतदाताहरू) कम्पनीहरू (वा राजनीतिज्ञ) उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा बुझेको चाहन्छन्। व्यक्तिहरूले स्प्याम र ब्यानर विज्ञापनको ठूलो मात्रा तिरस्कार गर्छन्। हामी नन-स्टप राजनीतिक विज्ञापनहरूलाई घृणा गर्छौं जुन हाम्रो बेलुका अभियानलाई निम्त्याउँदछ।
उपभोक्ताहरू वास्तवमै के चाहानुहुन्छ भनेर बुझ्नु र सीधा कुराकानी गर्नु हो। हामीलाई यो पूर्ण रूपमा थाहा छ - व्यक्तिगत अभियानहरू र खाता-आधारित लक्षित कार्यहरू। मलाई लाग्छ यो राजनीतिमा पनि काम गर्छ। यदि कोही जो कोही बाँया झुकाव विश्वास छ र तिनीहरू एक समर्थन विज्ञापन संग तिनीहरू सहमत छन् कि तिनीहरू सहमत छन्, तिनीहरू मनपर्दछ र यसलाई साझा। ठीक त्यस्तै गरी जो दायाँ झुकाव छ।
यद्यपि, उपभोक्ताहरू पछाडि लडिरहेका छन्। उनीहरूले फेसबुक र अन्य प्लेटफर्महरू प्रदान गरेको विश्वासको दुरुपयोगलाई घृणा गर्छन्। तिनीहरू अनलाइन लिने हरेक व्यवहारको संग्रहलाई तुच्छ ठान्छन्। एक बजारका रूपमा, यो समस्याग्रस्त छ। हामी कसरी सन्देश निजीकृत गर्छौं र तपाईंलाई पहिचान नगरीकन प्रभावकारी रूपमा डेलिभर गर्छौं? हामीलाई तपाईंको डाटा चाहिन्छ, हामीलाई तपाईंको आचरणहरू बुझ्नु आवश्यक छ, र यदि तपाईं सम्भावित हुनुहुन्छ भने हामीलाई जान्नु आवश्यक छ। तपाईंलाई लाग्छ कि यो डरलाग्दो छ ... तर विकल्प हामी सबैको बाहिर क्र्याप स्प्यामिंग हो।
यो गुगलको सम्बन्धमा के भइरहेको छ (जसले पंजीकृत प्रयोगकर्ताहरूको डाटा लुकाउँछ) र फेसबुकमा के हुन्छ हुन सक्छ, जसले पहिले नै अनधिकृत रूपमा घोषणा गरिसकेका छ कि डाटामा पहुँच प्रतिबन्धित हुने छ। यो समस्या राजनीति भन्दा पनि राम्रोसँग फैलिन्छ। प्रत्येक दिन म मेरो अनुमति बिना मेरो डाटा किनेको व्यक्ति द्वारा सयौं सम्पर्कहरू प्राप्त गर्दछ - र म बिल्कुल कुनै सहारा छैन।
स्प्याम र डरावना बीच पारदर्शिता हो
मेरो नम्र रायमा, म विश्वास गर्दछु यदि यस देशका संस्थापकहरूले डाटा यति मूल्यवान हुन जान्छन् भने, उनीहरूले अधिकार विधेयकमा संशोधन थप्न सक्ने भए जहाँ हामीसँग हाम्रो डाटा रहेको छ र जसले पनि यसलाई गर्न चाहान्छ उसले अभिव्यक्त हुन अनुमति दिनु भन्दा हाम्रो ज्ञान बिना यो फसल।
यसको सामना गरौं, उपभोक्ताहरू (र मतदाताहरू) लाई लक्षित गर्न र प्राप्त गर्नका लागि सर्टकटहरूको धक्कामा, हामी जान्दछौं कि हामी डराउँछौं। पछाडि हाम्रो गल्ती हो। र प्रतिक्रियाहरू आउने बर्ष लाग्न सक्छ।
म पक्का छैन कि ढिलो भयो, समस्या समाधान गर्नमा ढिला भयो। एउटा समाधानले यी सबैलाई समाधान गर्दछ - पारदर्शिता। मलाई विश्वास छैन कि उपभोक्ताहरू साँच्चिकै रिसाए किनभने उनीहरूले डाटा प्रयोग गरिरहेछन्… मलाई लाग्छ तिनीहरू रिसाए किनभने उनीहरूलाई यो पनि थाहा थिएन कि यो फसल काटियो र प्रयोग भइरहेको थियो। कसैले सोच्दैन कि फेसबुकमा एक राजनीतिक क्विज लिनु भनेको उनीहरूको डाटा तेस्रो पक्षहरूलाई खरिद गर्न र राष्ट्रिय राजनीतिक अभियानको लागि लक्षित गरी जारी गरिएको थियो। यदि तिनीहरूले गरे भने, तिनीहरूले ठीक क्लिक गरेनन् जब उनीहरूलाई उनीहरूको डाटा साझा गर्न आग्रह गरे।
के हुन्छ यदि प्रत्येक विज्ञापनले हामी यसलाई किन हेर्दैछौं भनेर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ? के हुन्छ यदि प्रत्येक ईमेलले अंतर्दृष्टि प्रदान गर्‍यो हामीले कसरी प्राप्त गर्‍यो? यदि हामीले उपभोक्ताहरूलाई सूचित गर्यौं किन हामी उनीहरूलाई विशेष समयमा विशेष सन्देशको साथ कुरा गरिरहेछौं, म आशावादी छु कि अधिकांश उपभोक्ताहरू यसका लागि खुला छन्। यो आवश्यक हुन गइरहेको छ कि हामी संभावना शिक्षित र हाम्रो सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु पर्छ।
म आशावादी छैन कि त्यो हुनेछ, यद्यपि। यसले अझ धेरै स्पाम निम्त्याउन सक्छ, अझ डरलाग्दो… जब सम्म उद्योग अन्तमा नियमित छैन। हामी यससँगसँगै पहिले पनि आएका थियौं मेल नगर्नुहोस् र कल नगर्नुहोस् सूचीहरू।
र यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ ती नियामक नियन्त्रणहरूलाई एक छुट थियो ... राजनीतिज्ञहरू.
टैग: क्याम्ब्रिज एनालिटिक्सउपभोक्ता डाटाडरलाग्दोतथ्याङ्कचुनाव डाटाचुनावफेसबुकओबामाओबामा चुनावगोपनीयतास्पामलक्ष्यीकरणपारदर्शिताट्रम्पट्रम्प चुनाव
Lumen5: एआई प्रयोग गरी सामाजिक वीडियो मा लेख repurpose
एch्कर: नि: शुल्क, सजिलो, मोबाइल मैत्री पोडकास्टि।